जाडोमा यसरी बनाउनुस् घ’रेलु उपायबाट छि’नभरमै हात न’रम र गोरो ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठरोचकजाडोमा यसरी बनाउनुस् घ’रेलु उपायबाट छि’नभरमै हात न’रम र गोरो !
काठमाडौं । सुन्दर दे’खिन अनुहार राम्रो भएर मात्रै हुँदैन। अनुहारका साथै हातगोडाको हे’रचाहमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । चिसो मौसममा त छाला झन् ख’स्रो हुन्छ। धेरैको ध्यान अनुहारको खस्’रोपन ह’टाउनेतिर मात्र जान्छ। हातको छालामा भएको खस्’रो कम गर्न त्यति ध्यान दिइँदैन । तर हातको हे’रचाह र न’रमपनमा उत्तिकै विचार पुर्यानुपर्छ। जाडोमा हात नरम बनाउन केही घ’रेलु वि’धि अ’पनाउन सकिन्छ। -दैनिक चिसो पानीमा हात खे’लाउनासाथ लो’सन प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले हातलाई न’रम बनाउनुका साथै छालालाई च’म्किलो पनि बनाउँछ।